Posted by zizawa ⋅ 10/05/2010	⋅ 18 Comments
ဒီလိုပဲ ဘယက်ကိစ္စဆိုရင်လည်း ဘယက်ပိုင်ရှင်နေရာမှာ ဝင်ကြည့်တော့ စကတည်းက ဆုံးခါနီးထိ သူတာဝန်ယူနိုင်တာ ဘာမှမပါဘူးလို့ ထင်တယ်။ တကယ့်အဆုံးသတ်မှာ ကိုယ်သာဆိုရင်တော့ တာဝန်ယူနိုင်တာ တစ်ခုပဲရှိတယ်။ သူ့ပစ္စည်း သူ့ပြန်ပေးလိုက်ဖို့ပဲ။ ပြန်ပေးလိုက်ပေမဲ့ သူ့မှာ 10 နှစ် အချိန်တွေကုန်သွားပြီ ဆိုလည်းပဲ ကိုယ်တာဝန်ယူ မဖြစ်တဲ့ ကိုယ့်အပြစ်လည်း မပါတဲ့ အပိုင်းအတွက်တော့ gulity ဖြစ်မနေနိုင်ဘူး လို့ပဲ ပြောရတော့မယ်။ တကယ်ကြုံခဲ့ရရင်တော့ စိတ်ခံစားမှု တစ်ခုခု ဖြစ်ချင်လည်း ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ဖျောက်ပစ်နိုင်အောင် ကြိုးစားမယ်။ လောကမှာ ကိုယ့်စေတနာက ဘာ ဆိုတာ ကိုယ်သိရင် ပြီးတာပဲပေါ့။ သိပ်တော့ အကြာကြီး guilty တွေဖြစ်ပြီး မနေနိုင်ဘူး။ ဖြစ်နေလို့ တခုခု ပြောင်းသွားမယ်ဆိုရင်တော့လည်း တမျိုး…
Posted by Rita | 11/05/2010, 04:32 Reply to this comment	ဒေါ်မေသီ နဲ့ ဒေါ်စိန်ကြည် အကြောင်း.. ဖတ်ခဲ့ရတုန်းက.. ( သင်တော့ မသင်ခဲ့ရ.. သင်ရိုးပြောင်းသွားလို့ ) ..နောက် မိုပါဆွန်း ၀တ္တုတိုများဆိုပြီး ဘာသာပြန် မှာ..ဖတ်ခဲ့ရတုန်းကတော့.. အခု..ကိုဝတုတ် တွေးသလောက် မခံစား မနက်နဲ မိဘူး။ အခု စာစု ကတော့..တရားမျှတမူ ရှုထောင့်က ချဉ်းကပ်ထားတယ် ဆိုတော့..ပြောသလို.. ကျူးလွန်မူ မရှိပါပဲလျက်.. မတရား ဖြစ်နေတတ်တဲ့..သဘောသဘာဝ ကို ဆင်ခြင် မိ ရတယ်..ဟုတ်တယ်…။ ငယ်ငယ်တုန်းက..ဖတ်ခဲ့တုန်းကတော့.. ၀ မရှိပဲ ၀ိ မလုပ်ဖို့… သင်ခန်းစာ ပေးခဲ့ တာလောက်ပဲ.. ရခဲ့တယ်။ တကယ်ကတော့.. လူတွေ ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ.. မြင်နိုင်တဲ့ တရားတွေ..မမြင်နိုင်တဲ့..တရားတွေ.. ညီမျှခြင်းချ မရတဲ့.. တရားတွေ.. အများကြီး ရှိနေတာ ..ကြာလေ..သိလေ.. သိလေ.. နက်နဲလေ.. နက်နဲလေ..နှိုက်မရလေ.. အဲဒါနဲ့ နှိုက်မရတော့.. လွယ်တာတွေပဲ.. လုပ်ပြစ်လိုက်ကြ ရောပေါ့..း)
Posted by K | 11/05/2010, 08:56 Reply to this comment	မကေပြောသလို ၀မရှိဘဲ ၀ိမလုပ်ဖို့ ဆိုတဲ့ သင်္ခန်းစာက မူရင်းဝထ္ထုတိုမှာ
Posted by zizawa | 11/05/2010, 10:44 Reply to this comment	အဲဒီစာကိုဖေဖေရှင်းပြဘူးတာမှတ်မိနေပါတယ်။ ၀မရှိပဲဝိမလုပ်သင့်ဘူးဆိုတဲ့ စကားကအဓိကလို့ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့.. အဲ့တုန်းက ဖေဖေ့ကိုပြန်မေးတာက..ဖေဖေ..ကောင်းပီ။သူက မရှိပဲနဲ့ လှချင်လို့လုပ်မိတယ်။ အင်း..ပစ္စည်းကပျောက်သွားတယ်။ဒါဆို သူ့အနေနဲ့ပိုင်ရှင်ကို အကျိုးအကြောင်းပြောပီးမှ လျော်သင့်တယ်ထင်တယ်လို့။ ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါ .. ပိုင်ရှင်က စိတ်ရင်းကောင်းသူဆို အတုဆိုလဲအတုလို့ပြောမှာပေါ့လို့။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီနေရာမှာပေးလိုက်တဲ့ သင်ခန်းစာကတော့ ကိုယ့်မှာရှိတာနဲ့လောက်အောင်သုံးဆိုတဲ့သင်ခန်းစာက အဓိကလို့ထင်ပါတယ်.
Posted by မြတ်နိုး | 12/05/2010, 00:32 Reply to this comment	၀မရှိဘဲ ၀ိလုပ်တာက တစ်ပိုင်း၊ သူတပါးပစ္စည်းကို ငှားပြီး တာဝန်သိသိမထိန်းသိမ်းမစောင့်လျှောက်ခဲ့တာကြောင့် ပျောက်ရတာက တပိုင်း(တို့အမြင်ကတော့ သူတပါးပစ္စည်းကို ငှားပြီးဆိုတာနဲ့ ကိုယ့်ပစ္စည်းထက်ကို ပိုပြီး သတိပြုစောင့်လျှောက်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မာနကြီးသူ၊ သူတပါးကို အလွယ်တကူမတောင်းပန်လိုသူ၊ သူတပါးကို အောက်မကြို့လိုသူဆိုရင်ပေါ့၊ အင်း.. သူတပါးဆီက ငှားဝတ်တယ်ဆိုမှတော့လည်း တလွဲစပင်ကောင်း မာနနဲ့ အောက်ကြို့တဲ့သူလည်းပဲ ဖြစ်နိုင်တာပေါ့လေ)။ ပြီးတော့ ကိုယ့်အမှားကို ကိုယ် ရဲရဲဝင့်ဝင့် မ၀န်ခံရဲတာက တပိုင်းကြောင့် ဆယ်နှစ်လုံးလုံး ဘ၀ကို ရင်းပြီး ပေးဆပ်လိုက်ရတာလို့ မြင်ပါတယ်။ ဒီပုံပြင်လေးကို injustice လို့ မမြင်ပါဘူး။ ကိုယ့်အမှားကို ကိုယ်တာဝန်ယူနိုင်မှုမရှိသူတွေ အတွက် သင်ခမ်းစာလို့ပဲမြင်ပါတယ်။ မာနကို မထားသင့်တဲ့ နေရာမှာ ထားပြီး၊ ကိုယ့်အမှားကို ၀န်မခံတတ်သူ လို့ပဲ မြင်ပါတယ်။ သူ့မှာ ဆယ်နှစ်လုံးလုံး အမှားဝန်ခံဖို့အချိန်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အမှန်ဆိုရင် သူတကယ် ကောင်းသော မာနရှိတယ်ဆိုရင် သူငယ်ချင်းကို ငါတော့ နင့်ပစ္စည်း ငါ့ကြောင့် ပျောက်သွားတယ်။ ဘယ်လောက်တန်သလဲ ငါလျှော်ပေးချင်ပါတယ်လို့ ရဲရဲဝင့်ဝင့် ၀န်ခံလိုက်ရင်ဖြင့် ဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးဖြစ်လာစရာမရှိပါဘူး။
Posted by anonymous | 13/05/2010, 10:50 Reply to this comment	ကိုဝတုတ် ဆိုလား? ကျွန်တော်ကတော့ နံပတ်၅ ကွန်မင့်န် ကိုသဘောကျ ထောက်ခံချင်တယ်။ နဲနဲ အတွေးနက်လွန်း သွားတယ်ထင်တယ်။ ဒီလည်ဆွဲကိစ္စ မှာ ကိုယ့်အမြင်တော့ မတရားမှုဆိုတာကို မတွေ့မိဘူး။ သင်ခန်းစာတွေပဲ တွေ့ရတယ်။ အထူးသဖြင့် လည်ဆွဲ ပိုင်ရှင်ဟာ ဒီကိစ္စမှာ လုံးဝရိုးသားတယ်။ ဘာမှ မပတ် သက်ဘူး။
Posted by ကိုရင်ကောင်းမြတ် | 15/05/2010, 18:45 Reply to this comment	ကျနော့် ဘလော့ကို ဖတ်ပြီး မှတ်ချက်တွေ ရေးပေးခဲ့တာ ထင်မြင်ချက်တွေ ထားခဲ့တာ ကျေးဇူးပါ။ နောက်ဆုံးမှတ်ချက်ပေးခဲ့သူ နှစ်ယောက်က လည်ဆွဲ ပျောက်တဲ့ ကိစ္စမှာ မတရားမှု ပါတယ်လို့ မမြင်ကြဘူး။ ကျနော်ကတော့ မတရားမှုဖြစ်နေပြီလို့ မြင်တယ်။
Posted by zizawa | 16/05/2010, 00:34 Reply to this comment	(မတရားမှုကို သိသိနဲ့ ကျူးလွန်သူ မရှိဘဲ မတရားမှု ရှိနိုင်လား)
ဒါပေမဲ့ ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းမို့ ဇာတ်လမ်းကို ဝေဖန်ရရင်… (မူရင်း ဇာတ်လမ်း မဖတ်ဖူးပါ။ သို့သော် ၈ တန်းမှာ အကျဉ်းသင်ခဲ့ဖူးတယ်။ ၈ တန်းလို့ ထင်ပါတယ်။ 94 လောက်က သင်ရိုးမှာ) ယုတ္တိရှိတယ် မထင်ပါ။ ဟာကွက်တွေကို (ဗမာမျက်စေ့နဲ့) ထောက်ရရင်တော့ အများကြီးပါပဲ။ ဥပမာ – သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကြားက ရင်းနှီးပတ်သတ်မှု… အဖိုးတန်လက်ဝတ်ရတနာတစ်ခု (အတုဖြစ်ကြောင်းက နောက်မှ သိတာနော်) ငှားပြီဆိုကတည်းက တော်ရုံရင်းနှီးတာ မဟုတ်လို့ပေါ့ ။ ပျောက်ပြီဆိုတော့လည်း ဒီလောက် ရင်းနှီးတာ အရင်ဆုံး အကြောင်းကြားမှာပေါ့။ ငါ ပြန်ဝယ်ပေးပါမယ်။ ဘယ်လောက်တန်သလဲ ဟဲ့ ဆိုပြီး။ ဟိုဘက်ကလည်း ဖြောင့်မတ်သူ ဖြစ်တော့ သူငယ်ချင်းရေ အဲဒါ အင် ကြီးပါဟာ ဆိုတာနဲ့ ပြီးသွားမှာပဲ။ နောက်တခုက ဗမာမျက်စေ့နဲ့လို့ ရှေ့မှာ စကားခံထားတော့ ဗမာမျက်စေ့နဲ့ ယုတ္တိမတန်တာတစ်ခု ထပ်တွေ့သေးတယ်။ ဒီဘယက်နဲ့ လက်ရာတူတာ ဝယ်ပေးနိုင်ဖို့ဆိုတာ သိပ်တော့ မလွယ်ဘူး။ ဘာလို့ဆို သိသလောက်က ဗမာအများစုသည် စိတ်ကြိုက်(စိတ်ကူးတည့်ရာ) ဒီဇိုင်းမျိုးကို ပန်းထိမ်သေချာအပ်ကြတာကိုး။ ready made တွေက နောက်မှ ပေါလာတာနော်။
Posted by RITA | 17/05/2010, 02:30 Reply to this comment	(မတရားမှုကို သိသိနဲ့ ကျူးလွန်သူ မရှိဘဲ မတရားမှု ရှိနိုင်လား)
အင်္ကျီဝယ်ယူသူအနေနဲ့၊ ပင်စင်ခံစားသူတယောက်အနေနဲ့ ကွေ့ရှောင်သွားလို့ မရဘူးဆိုတာကိုလည်း ဝန်ခံရပါမယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီအမှုကိစ္စတွေမှာ မတရားလုပ်သူ အထင်အရှားရှိနေတာပဲ။ ကြံဖန်ပြီး ကျေးဇူးတင်ရဦးမှာက ဟိုတဘက်မှာ လုပ်ခနည်းနည်းပေးပြီး ခိုင်း၊ ဒီတဘက်မှာလည်း ကုန်ပစ္စည်းဝယ်ယူမယ့်သူတွေကို အမြတ်အတော်လေးတင်ပြီး ရောင်း ဆိုတာမျိုး မလုပ်တာကိုပေါ့။ $4လောက် ထိတင်လိုက်လို့လဲ ဝယ်လိုအားနဲ့ အမြတ်လျော့မသွားနိုင်တာကို $2လောက်နဲ့ ရောင်းနေတယ် ဆိုရင် ပြောပါတယ်။ (အဲဒီ စီးပွားရေးသမားဟာ အောက်ကွန်မန့်မှာ ထည့်ရေးထားတဲ့ သူငယ်ချင်းလိုလူစား ဖြစ်နိုင်တယ်။ :))
Posted by RITA | 17/05/2010, 04:43 Reply to this comment	နောက်တခုက အမှတ်စဉ်ထဲမှာ မပါပေမဲ့ post က အဓိကပြောချင်တဲ့ အချက်လဲ မဟုတ်ပေမဲ့ ကျွန်မ ဆွေးနွေးချင်မိတာ… (အကုန်လုံး လုပ်နေရုံသက်သက်နဲ့မတရားတဲ့ အလုပ်တခုဟာ တရားတဲ့ အလုပ်ဖြစ်မလာဘူး) ဆိုတာ… အဲဒါကို အင်မတန် ထောက်ခံပါတယ်။ ဗမာပြည်လို့ ရံဖန်ရံခါ စဉ်းစားလိုက်မိတာနဲ့ တနိုင်ငံလုံးဆိုတာထက် တယောက်ချင်း တာဝန်ယူနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေပဲ ခေါင်းထဲ ပိုရောက်လာပါတယ်။ ကျောင်းတုန်းကတည်းက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ရှိပါတယ်။ အဲဒီသူငယ်ချင်းက ရန်ကုန်မှာ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း၊ အင်းယားလမ်း၊ နတ်မောက်လမ်း လို နေရာမှာ နေပါတယ်။ (ဘယ်လိုနေရာမှာ နေတယ်ဆိုတာကို အထူးသဖြင့် တမင် ထည့်ရေးပါတယ်။ လမ်းကိုတော့ အတိအကျ ထည့်မရေးချင်လို့ပါ။) ကျောင်းပြီးရင် ဘာလုပ်ကြမယ် ဆိုတာကို ပြောမိကြတဲ့အခါတိုင်း ကျွန်မနဲ့ သူနဲ့ ငြင်းရတဲ့ ကိစ္စတခုက အစိုးရအလုပ်ဝင်တာနဲ့ ပတ်သတ်လို့ပါပဲ။ ကျွန်မကတော့ ခေတ်အခါအခြေအနေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ရွေးချယ်နိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ အခြေအနေအရ (<< အဲဒီအချက်ကိုလဲပဲ အထူးသဖြင့် တမင် ထည့်ရေးပါတယ်) အဲဒီလို အနေအထားမှာ အစိုးရအလုပ်ကို လုံးဝမှ ဝင်လုပ်မယ့်သူ မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့ကို ပြောမိပါတယ်။ အများပိုင်ပစ္စည်းနဲ့ မစားချင်၊ မသောက်ချင်၊ မချမ်းသာချင်၊ လက်ဖျားနဲ့သော်မှ မတို့ချင်။ တကယ်လို့ ငါသာ ဝင်လုပ်ရင် ငါရှောင်နိုင်ချင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ တခါရှောင်မယ်၊ နှစ်ခါရှောင်မယ်။ သုံးခါကျတော့ ရှောင်နိုင်ပါ့မလား။ (တချို့ကိစ္စတွေက ရှောင်မယ်ဆိုရင် လုံးဝကင်းအောင်ရှောင်ပါမှ၊ အနီးက ကပ်ရှောင်ရင် မလွတ်ဘူး) အဲဒီအခါတိုင်း သူက ပြောပါတယ်။ "သူများတွေလည်း လုပ်နေတာပဲဟာ။ သူများလုပ်နေတာတွေ ငါတို့မလုပ်ရဘူးလား"
သူ့ကို ပြန်ပြောပါတယ်။ လူအကုန်လုံးလုပ်နေလည်း မကောင်းတာက မကောင်းတာပဲ။ မကောင်းတာက ကောင်းတာ ဖြစ်မသွားဘူး။ အဲဒီတုန်းက အဲလောက်ပဲ ပြောတတ်ခဲ့တယ်။ တကယ်တော့ ပိုပြီး ထင်သာမြင်သာရှိအောင် ပြောခဲ့ရမှာ… သူများလုပ်လို့ မင်းလိုက်လုပ်မယ်လို့ စဉ်းစားရင်၊ အဲဒီသူများတွေက အဲလိုလုပ်ပြီးတိုင်း မစင်စားတယ်ဆို မင်းလိုက်စားမလား လို့။ ဒါဆို သူ့စိတ်က သူ့ဘာသာ လုပ်ဖို့ ကိုင်းညွှတ်နေတဲ့ကိစ္စကို သူများကြောင့်လို့ ဖြေတွေးနေတာကို သူ ပြက်ပြက်ထင်ထင် မြင်သွားမယ်ထင်တယ်။
ဒီနေရာမှာလဲ လိုအပ်လို့ အထူးသဖြင့် ထည့်ပြောရမယ့် ကိစ္စရှိသေးတယ်။ အဲဒီသူငယ်ချင်းရဲ့ စိတ်က တကယ်တော့ အတော်ဖြောင့်တယ်။ ကူလီကူမာ မရှိဘူး။ သူ့ရှေ့မှာ အရှိကို အရှိတိုင်း ပြောလို့ ဆိုလို့ နေလို့ရတယ်။ သူကိုယ်တိုင်ကလည်း အဲလို နေတယ်။ ဒါပေမဲ့ စာဖတ် သိပ် ဝါသနာမပါ။ နည်းနည်း အားစိုက်တွေးရမယ်ဆို သူ မလုပ်ချင်။ ကျောင်းမှာ သူအမုန်းဆုံး ဘာသာရပ်က drawing နဲ့ programming. ဒီကိစ္စမှာ အဓိက အထူးပြုပြီး ပြောချင်တာက ဖြောင့်မတ်၍ ကူလီကူမာ မရှိသူလို့ အာမခံနိုင်တဲ့၊ ဆိုခဲ့ပြီးတဲ့ နေရာမျိုးမှာ နေထိုင်တဲ့ သူငယ်ချင်းမှာ ဒီလို အတွေးရှိတယ် ဆိုတာပါ။ ဒီနေရာမှာ ဖြောင့်မတ်မှတော့ ဒီလို အတွေး တွေးပါ့မလားတွေ၊ နောက် သူနေထိုင်ရာကို ညွှန်းဆိုတာမှာ ဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာနေနေ နေတဲ့နေရာနဲ့ စိတ်ဓါတ်ဘာဆိုင်လို့လဲဆိုတာတွေ အငြင်းပွားဖွယ်ရာ ဖြစ်ပေမယ့် ဒါတွေကိုမငြင်းချင်ဘူး ဆိုတာတော့ ကြိုပြောချင်ပါတယ်။ သူဘယ်မှာနေတယ်ဆိုတာကို တမင်ထည့်ပြောရခြင်း အကြောင်းရင်းက သူ့မှာ ဒီအလုပ်ထဲဝင်ပြီး ဒီလို လုပ်စားမှရမယ့် ရွေးချယ်စရာ အခြေအနေမရှိတဲ့သူ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာကို ပြောချင်တာပါ။ ဆိုလိုရင်းက မှိုင်းမိလို့မှ မိမှန်း မသိကြတော့ဘူး။
မြန်မာပြည်မှာ အတော်များများကတော့ ဒါကို ထမင်းစားရေသောက် လုပ်ရမယ့် ကိစ္စလို့ တွေးကုန်ကြပြီ မြင်မိတယ်။ မလွှဲမရှောင်သာ လုပ်ကိုလုပ်ရမယ့်သူတွေမှာလည်း လုပ်စရာရှိတာကို လုပ်လိုက်၊ ဒါပေမဲ့ ဒါကို မလွှဲသာလို့သာ လုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့ အသိရှိတဲ့သူ ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိပါ့မလဲ။ ညွှန် အဆင့်ရာထူးရှိတဲ့ အင်ဂျင်နီယာ လူကြီးတစ်ယောက်ရဲ့သားတွေ တက္ကသိုလ်ကောင်းကောင်းက ကျောင်းပြီးတော့ ရာထူးကောင်းစရာမလိုဘူး၊ ဌာနန္တရ ကောင်းဖို့ပဲ လိုတယ်လို့ ကြွေးကြော်ကြတယ် ကြားဖူးတော့ အတော် အံ့အားသင့်မိပါတယ်။ သူတို့သင်ထားတဲ့ ပညာနဲ့ မိဘအခြေအနေအရ နိုင်ငံခြားကို 10 ခါပြန် ထွက်လို့ရတယ်။ (အင်း ဒီလိုပြောရင် နိုင်ငံခြားထွက်တာ ကိုယ်လွတ်ရုန်းတာ ဆိုတာ ငြိပြန်ဦးမယ်။ ဘယ်လိုပြောရပါ့။ အဲဒီလို အခြေအနေမျိုးမှာ "ရာထူးကောင်းစရာမလိုဘူး၊ ဌာနန္တရ ကောင်းဖို့ပဲ လိုတယ်" လို့ ကြွေးကြော်နေမယ့် အစားတော့ ကိုယ်လွတ်သာ ရုန်းပစ်လိုက်စမ်းဘာ)
Posted by RITA | 17/05/2010, 05:19 Reply to this comment	FYI
Posted by RITA | 17/05/2010, 06:08 Reply to this comment	မှတ်ချက်တွေ ရေးထားခဲ့တာ၊ စိတ်ပါလက်ပါ ဆွေးနွေးကြတာတွေအတွက် thank you once again ပါ။ အတော်များများက (မှတ်ချက်မထားခဲ့ဘဲ အပြင်မှာ လူချင်တွေ့ စကား
Posted by zizawa | 17/05/2010, 10:11 Reply to this comment	ကိုဝတုတ်ရေ
Posted by KNSL | 06/06/2010, 00:35 Reply to this comment	‘ဘောင်ခတ်ထားတဲ့spaceထဲမှာသာ freeဖြစ်နေတာထက် တခါတလေ ကျတော့
Posted by zizawa | 06/06/2010, 10:34 Reply to this comment	တကယ်တမ်းတွေးကြည့်တော့ ကိုဝတုတ်ဆိုခဲ့သလို ဘောင်အကြီးကြီးထဲမှာမှ ဘောင်တွေအဆင့်ဆင့် ပြန်ခတ်တဲ့ သို့ ရှိတဲ့ သဘောပါပဲ။
Posted by KNSL | 06/06/2010, 10:47 Reply to this comment	၀မ်းသားပါ၏။ ရေးရကျိုးနပ်ပါ၏။ အချက်အလက်မှားနေတာတွေ့ရင် သဘောမတူတာတွေ တွေ့ရင် ၀င်ထောက်၊ ၀င်ဆွေးနွေးသွားပါဗျ။
Posted by zizawa | 06/06/2010, 11:12 Reply to this comment	The article was not in seventh standard English course. It’s in eighth standard .
Posted by li li wong | 20/06/2010, 11:30 Reply to this comment	ok.. thanks for the correction…
Posted by zizawa | 20/06/2010, 12:37 Reply to this comment	LeaveaReply Cancel reply	Enter your comment here...